Ukunciphisa Izinqola Ezilahlekile Martech Zone
Ngisanda kubuka i- ividiyo Imenenja yeTarget emi phezu kokuphuma kwayo, yethula inkulumo evusa isifuba kubasebenzi bayo ngaphambi kokuvula umnyango kubathengi beBlack Friday, ihlanganise amabutho ayo kube sengathi ibalungiselela impi.
Ngo-2016, i-mayhem eyayinguBlack Friday yayinkulu kunangaphambili. Yize abathengi bachitha ngokwesilinganiso $ 10 ngaphansi kwalokhu abakwenzile ngonyaka odlule, kwakukhona abathengi abayizigidi ezintathu ngaphezulu kweBlack Friday ngo-2016 kunango-2015, beshayela $ 3.34bn (ukwanda ngama-33%) ekuthengisweni.
Kodwa-ke, ngesihe kubasebenzi okwakumele bazibambele ukuvinjelwa, inani elandayo labathengi lakhetha ukuthenga nge-inthanethi, hhayi ezitolo zezitini nodaka. Ngo-2015, abantu abangaba yizigidi eziyi-103 bathenga ku-inthanethi phakathi noBlack Friday, uma kuqhathaniswa nabangu-102 million abasesitolo. Kulo nyaka, lolu shintsho selugqame kakhulu, abathengi abangaphezu kwezigidi eziyi-108 bathenga ku-inthanethi, kanye nezigidi ezingama-99.1 bazibophezela ngezivumelwano mathupha ngokwendlela I-NRF.
Ikakhulu, umakhalekhukhwini uvele njengonqobile weBlack Friday 2016, nabathengisi kubandakanya i-Amazon, iWalmart, neTarget bebika usuku lwabo olumatasa kakhulu lokuhamba ngezimoto. Ngisho nangaphambi kokuba uLwesihlanu luphele, abathengisi babebike irekhodi $ 771 million ngemali engenayo evela kumadivayisi we- # mobile
Okungcono futhi, amazinga wokuguqulwa abikwa ukuthi anakho yanda nge-16.5% kusukela ngo-2015, ngamanani okushiya inqola ehla ngo-3%. Ngenkathi ungacabanga ukuthi lesi yisizathu sokugqashula iProsecco bese uzihalalisela ngomsebenzi owenziwe kahle, kudingeka umbono othile: ngo-2016, abathengisi basalahlekelwe ngama-69% yabathengi abaku-inthanethi be-Black Friday abashiya ukuthenga kwabo.
Ayikho inhlangano ethanda ukushiya imali etafuleni, futhi ukuzama ukuyibuyisa kuveza umncintiswano wokulwa nesikhathi - phela, akuwona amakhasimende amaningi angaqhubeka nokuthenga okubizayo uma iBlack Friday isidlulile. Ngaphezu kwalokho, ezinye izikhuthazo ezijwayelekile zesaphulelo azisebenzi kulesi sibonelo. Unalokho engqondweni, nazi izeluleko ezimbalwa zokubhekisisa ukululama kwenqola ngalesi sikhathi seholide.
Hlakanipha: Isoftware yokuthengisa yesikhathi sangempela kufanele ibe yindawo yakho yokuqala. Ngalobu buchwepheshe, lokhu kukuvumela ukuthi wakhe ama-imeyili anama-'smart block' - izigaba zokuqukethwe okwenzelwe wena okuvumela ukuthi ufake ama-banner, ama-countdown timers, izincomo zenkambiso nobufakazi bezenhlalo kumyalezo wakho wokutakula odalekile.
Ukulandela ngomkhondo isikhathi sangempela: Njengoba isikhathi sisemqoka, ukukwazi ukuqapha ukulahlwa kwenqola njengoba kwenzeka kubalulekile. Ngenkathi ezinye izindlela zingathatha isikhashana ukukuxwayisa ngokushiywa (ukulinda isikhathi sokuphuma, ngokwesibonelo), sebenzisa isoftware engalandela ukulahlwa ngesikhathi sangempela, okwenza ngokushesha i-imeyili yokutakula equkethe okuqukethwe kubhasikidi wabo.
Yenza ukubuya kwabo kube lula: Uma ufuna ukubuya kwekhasimende, kwenze kube lula ngabo. Okuqukethwe inqola yabo, okuphelele ngokubonakala okuhehayo komkhiqizo wabo, akunakushiwo, ngakho-ke futhi kufanele kube khona ukubizelwa esenzweni okuvelele okuzobabuyisela ngokushesha ohambweni lwamakhasimende lokuthatha lapho begcine khona.
Kwenze kube ngokwakho: Isikhumbuzi esimnene sokubingelela komuntu siqu kanye / noma izincomo ezenziwe zaba ngezakho zokugcwalisa inqola yabo kungenzeka zingagcini ngokuzilinga emuva kodwa futhi zikhuthaze ukuthengwa kwemizwa eyengeziwe.
Yakha umuzwa wokuphuthuma: Uma umcabango wezigidi zabanye abathengi ngasikhathi sinye befuna ukuthengiselana awenele ukugqugquzela ukuthengwa, i-imeyili yokutakula ekhombisa amazinga akho wamasheya angalimaza ikhaya langempela.
Bakhumbuze ukuthi kungani bethanda okuhle: Ngabe umthengi wayecabanga okwesibili? Gcizelela isinqumo sabo ngobufakazi obuhle bamakhasimende noma ukubuyekezwa komsebenzisi ukusiza ukubakhuthaza ukuthi babuyele emuva.
Yenza izimpilo zabo zibe lula: Izindleko zokulethwa ezingalindelekile zivame ukucashunwa njengesizathu sokushiywa kwenqola - izindleko ezinkulu zokuposa zingamisa ukunikezwa kweHholide ekubeni yingxoxo enkulu kakhulu. Noma kunjalo, umyalezo wokutakula inqola uyithuba elihle lokukhumbuza abathengi nganoma yikuphi ukuchofoza nokuqoqa noma ezinye izinketho zokulethwa ozinikezayo.
Susa noma yikuphi ukungabaza: Ngethuba lokonga imali, isilingo sokuthonya sizoba ngaphezulu kunokujwayelekile. Kodwa-ke, ukuxhamazela kungaholela ngokushesha ekuzisoleni nasekulahlweni ngaphambi kokuthenga. Nikeza isiqinisekiso ngomyalezo wokutakula okhomba inqubomgomo yakho yokubuyisa, noma iyiphi imali ebuyiswayo ikuqinisekisa ukuthi uyinikeza futhi uma uletha mahhala.
Ngokombono womthengi, kulula ukuzwelana nezinye zezizathu ezingaba khona zokubheja ukuthengisa. Ngokuhamba kwesikhathi (nokwehla ngokushesha kwamasheya), isidingo senqubo yokuphuma elula, esheshayo futhi engenamthungo sibalulekile. Kulawo masayithi adinga ikhodi ekhethekile yangoLwesihlanu oMnyama, ukukwazi ukufaka isicelo kalula futhi ubone imiphumela yesaphulelo (kanye nezindleko zokulethwa) ngaphambi kokufika esigabeni sokukhokha kungenza noma kuphule ukuguqulwa.
Kanjalo futhi, kunesidingo sezinqubo zokubhaliswa ezihlehlisiwe. Njengoba amakhasimende kungenzeka avakashele amasayithi angakaze abe nawo, ukungabikho 'kokuphuma kwezivakashi', noma ukubhekana nefomu elide okufanele aligcwalise ngaphambi kokuzama ukuthola leyo MacBook Pro yokugcina kudala isithiyo esikhulu.
Ngenqubo yokuphuma ekhishwe futhi yahlengahlengiswa ukuthi ingabi nengcindezi kwideskithophu, ithebhulethi noma iselula, ephelele nge-arsenal yokuthola inqola ephelele, usenesikhathi sokuthinta kahle ukuthengisa ngaphambi kokuphela konyaka.
Tags: 2016Ulwesihlanu olumnyamaabathengi bangoLwesihlanu abamnyamaaluhlazaizitini nodakaukuthenga onlineumshushisiRetailers
UC Curt Bloom
UC Curt Bloom unguMongameli we BlueVenn I-US, umhlinzeki wesoftware wokukhangisa weziteshi eziningi. UCurt phambilini ubephethe isikhundla esikhulu sobuholi nge-smartFOCUS futhi waba neqhaza ekukhuleni kwebhizinisi emhlabeni jikelele. Kusukela lapho, uCart ubesebenza ngeziqalo eziningana zase-US, ezindaweni zokuxhumana, ukuzibandakanya kwamakhasimende ngesikhathi sangempela kanye ne-analytics. NjengoMongameli wemisebenzi yase-BlueVenn yase-US, uCurt ubheka ukwandiswa kweBlueVenn ngaphesheya kwe-US futhi uhola iqembu eliphethe amaklayenti akwa-BlueVenn aseMelika.